On mai 21, 2019 5 213
Soratra : Andry Rakotonnirainy
Miisa 23 ireo vato izay mampidi-doza ka ahiana hianjera ao aminny avaratra Ankatso , Andrefan’Ambohijanahary, Ampamarinana, Antsombolo ary Tsimialonjafy. Raha tsy misy fepetra hentitra raisina momba azy ireo dia ampidi-doza ho an’ny olona eny an-toerana izany.
Nidina ifotony nijery akaiky ny fisian’ny vato ny Sekretera mpanatanteraka ao aminny Bngrc kolonely Elack Andrianjaka, ny Alarobia 08 mey teo . nandritra izany no nahitana fa efa misy ny vato be iray milanja 500 taonina, ao Fokontany Andoharano, Tsarafaritra Tsimbazaza, izay ahiana hianjera , ka ilaina fanapaha-kevitra haingana.
Nidinika tamin’ny mponina mitoetra eny amin’io toerana, voalaza io ny Bngrc ka namaritra ny fomba hanesorana izany. Fantatra fa amin’ny fomba gasy no hanapoahana ny vato, izay haharitra telo volana eo. Hoesorina ny mponina, afindra amin’ny toerana azo antoka . » Tandindomin-dozany mponina ireo raha tsy misy fandraisana andraikitra, ka izay no antony nitsidihana iny toerana iny. Tokony manapa-kevitra avy hatrany ny mponina moninasatria afaka herinandro dia vakiana ny vato voalohany milanja 500 taonina io », hoy ny mpitantana ny BNGRC.
Tsy miasa irery ny birao nasionaly misahana aroloza voanjanahary, fa mis ny mpiara-miombon’antoka. Nitsidika ny foiben’ny BNGRC, ny Alakamisy 09 mey 2019 lasa teo, ny avy ao amin’ny mpandrindra ny asan’ny Firenena Mikambana miasa eto Madagasikara sy ny Unicef, nijery akaiky sady nifandinika ny momban’ny fanohizana ny fiara-miasa amin’ny roa tonta.
TAFIKA MALAGASY : JENERALY RABENAIVOARIVELO JEAN CLAUDE VOATENDRY HO KOMANDIN’NY RM1